आईजीपी चढ्छन् १६ वटा गाडी (तस्वीरहरू र सूची)
रिपोर्टआइतबार, १६ मंसिर , २०७५
एक व्यक्तिलाई कति वटासम्म गाडी चाहिन्छ? अझ प्रष्टसँग भन्दा एक कर्मचारीले कति वटासम्म गाडी प्रयोग गर्न सक्छन्? यसको सीधा जवाफ कतै नभेटिए पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डअनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सरकारी सुविधावापत एउटा मात्र गाडी पाउँछन्। विशिष्ट श्रेणीकै पद भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले पाउने सुविधाको गाडी संख्या पनि त्यति नै हुनुपर्ने हो।
सुरक्षा संगठनका प्रमुख भएकाले प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो सुरक्षा टोलीलाई अघिपछि लगाउँदा थप दुई वटासम्म गाडी प्रयोग गर्न सक्छन्। औपचारिक र अनौपचारिक सवारीका लागि अलग-अलग गाडी चाहिन्छ भन्ने हो भने पनि उनले प्रयोग गर्ने गाडी चार वटाभन्दा धेरै नहुनु पर्ने हो। तर, आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।
यी हुन् आइजीपी खनालले प्रयोग गरिरहेका गाडीः
जानकारहरू भन्छन्- यति धेरै गाडी एक्लै प्रयोग गर्ने खनाल सम्भवतः इतिहासकै पहिलो प्रहरी महानिरीक्षक हुन्।
देशभरका प्रहरी एकाइहरूले नियमित गस्ती गर्ने र कुनै गम्भीर घटना हुँदा तत्काल घटनास्थल पुग्ने गाडीको अभाव खेपिरहेका बेला प्रहरी प्रमुखको यस्तो गाडी मोहले प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै अचम्मित तुल्याएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको सवारी शाखाबाट उपलब्ध आँकडाअनुसार १६ मध्ये पाँच वटा महँगा गाडी आईजीपी खनालले आफ्नो कार्यालयमा राखेर प्रयोग गरिरहेका छन्। र, १० वटा गाडी उनले निवासमा राखेर प्रयोग गरिरहेका छन्। एउटा गाडी भने उनको स्कर्टमा प्रयोग गरिएको छ।